Vista's Colorful Planet: ပဲများတဲ့ဌက်ကလေး
ဌက်ကလေးကရောင်စုံလေးအစက်လေးတွေနဲ့ လှလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်မိပါတယ်
သူ့ ကိုရိုက်နေမှန်းသိလို့ လှမ်းတောင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်
ငှက်လေးကတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် တခါမှမမြင်ဘူးဘူး ကဲကဲကိုတောင်သတိရသွားပြီ အဟင့်
အေးလေဟာ ဘလော့ပိုင်ရှင်က သူနဲ့ တူတဲ့ ပဲများတဲ့ငှက်ကို သေ၂ချာ၂ကို ရိုက်ထားတာပဲ
ဒါပေမယ့် ငှက်က ပဲများပေမယ့် ပိုလှတယ်ဗျာ
ကဲ အဲဒါအမှန်မဟုတ်လား ငှက်ကြည့် ပိတ်သတ်ကြီးများ
(မထောက်ခံပါက နဖူးထိပ်အာလူးထွက်အောင် ထုမည်)
ပဲများတဲ့ဘီဇီးနတ်မမ ၁ယောက်သွားသတိယလို့ ပါ ဟက်ဟက် ..
ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ငှက်ကလေးက ပိုလှပါတယ်
ထောပတ်သီး ပြောတာလည်း မှန်ပါတယ် မှန်ပါတယ်
အပြာလေးက ဂဏာမငြိမ်ဘူးမေရဲ့ 
ဘယ်လိုမှကို ရိုက်လို့ မရဘူး
Zar Chy Says:
vistaရေ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ Proပဲနော်
How to setupabasic Kubernetes cluster and add an NGINX Ingress Controller on DigitalOcean
ချင်းချဉ်မွှေးမွှေးလေး - ဗီယက်နမ်ဈေးကိုသွားရင်း ချင်းနုနုလေးတွေ တွေ့တာနဲ့ ဝယ်လာပြီး ချင်းချဉ်လေးတည်ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာကို ချင်းချဉ်ကို တည်ပြီးစားတော့ သန့်သန့်လေး စားရသ...
Feeling 92 အမှတ်တရ - *Feeling 92 အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ။* ဟိုးတုန်းက ဘလောဂ့်မှာ စာတွေရေးတင် ဘလောဂ့်အိမ်လည်ကြတာ အမှတ်ရမိတယ်။ စာတွေရေးဖြစ်ရင် ပျော်ပါတယ်။ စာမရေးဖြစ်ရင် မပျော်ပါဘူ...
Residency at Beach64retreat - Happy Martin Luther King day weekend and here I am at Beach64retreat making some of my projects. Special Thanks to Wojciech and Bartek for hosting me over ...